ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှု - ကွာရှင်းခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်မဟာဗျူဟာများ
ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှ
သင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည့်ဘဝရှိအရာများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်သင်၌ကောင်းသောအရာတစ်ခုလိုအပ်ကြောင်းသင်သိကောင်းသိပေမည် ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်။ သင်၏အစီအစဉ်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက်သင်၏ငွေ၊ ပစ္စည်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်အခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်သင့်သည်။ တန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ထိရောက်သောအစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်မှာယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဥပဒေဆိုင်ရာကိရိယာများသည်မခိုင်မာပါ။ ရလဒ်အပေါ်အခြေခံသည့်အမေရိကန်တရားသူကြီးက၎င်းကိုပယ်ချနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အခိုင်မာဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်အတွက်အနောက်ကမ္ဘာမှလူအများစုသည်နိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသို့ပြောင်းလဲသွားကြသည်။ ထိုအခါပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရားစွဲမှုမှကာကွယ်ရန်အပြင်းထန်ဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယုံကြည်မှု စနစ်တကျမှန်ကန်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။
ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့အနက်မှအကောင်းဆုံးရယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဘယ်နေရာမှာတစ်ခုဖန်တီးသင့်သလဲ ဘာကြောင့်တကယ်ကောင်းတာလဲ။ ဤဆောင်းပါးသည်ထိုမေးခွန်းများ၏အဖြေများကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နည်းလမ်းအချို့ကိုရှင်းပြလိမ့်မည် ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု.
Asset Protection ဆိုတာဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းကိုလေ့လာမလေ့လာမီ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုဆိုင်ရာယုံကြည်မှုသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးကြပါစို့။ Investopedia တစ် ဦး ချင်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းရန်အတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယုံကြည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဤသည်မော်တော်ယာဉ်အဓိကအားသူတို့အားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကြွေးကနေကာကွယ်ပေးသည်။ ယုံကြည်မှုကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်ပြီးစီးသောအခါ၊ ဤဘဏ္toolာရေးဆိုင်ရာကိရိယာသည်အကြွေးရှင်များကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေသည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကြွေးရှင်များကိုကြွေးရှင်များနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာငွေချေနိုင်စေရန်နှင့်စျေးကြီးသောတရားစွဲဆိုမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်
ယုံကြည်မှုအားလုံးတွင်အဓိကပါ ၀ င်သောပါတီသုံးခုပါဝင်သည်။ settlor (ယုံကြည်သူသို့မဟုတ်ခွဲဝေသူဟုလည်းခေါ်သည်)၊ ဂေါပကနှင့်အကျိုးခံစားသူ။ ယုံကြည်မှုဖန်တီးသူမှာ settlor ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ settlor ယုံကြည်မှုကာကွယ်ပေးသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကူညီသည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအကျိုးအတွက်အကျိုးဆောင်ရန်ဖန်တီးမှုပြုပြီးနောက်ဂေါပကသည်ယုံကြည်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။ အကျိုးခံစားသူသည်ယုံကြည်မှုမှဖြန့်ဝေခြင်းကိုခံယူသည်။ ဤရွေ့ကားဖြန့်ဝေသည် settlor ၏မူလရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဂေါပက၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ယုံကြည်မှုတစ်ခုသည်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အတွက်၊ ဆိုလိုသည်မှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးပါကဂေါပကကြားဝင်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းကိုအလွယ်တကူမပြောင်းလဲနိုင်သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်နိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဘာကြောင့်လဲ အကယ်၍ အခြေချနေထိုင်သူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူသည်အပြောင်းအလဲများကိုတိုက်ရိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါကတရားသူကြီးကထိုသူအားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအားတရား ၀ င်ရန်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တရားသူကြီးများအနေဖြင့်ယုံကြည်မှုရှိသူများအားအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရန်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးနိုင်စွမ်းကိုကန့်သတ်ချက်မရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ spendthrift အပိုဒ်သည်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအားယုံကြည်စိတ်ချမှုအားလျော့ချခြင်း (သို့) တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားပေးဆပ်ရန်ကတိပြုခြင်းများကိုတားဆီးထားသည်။ ဤအပိုဒ်သည်ကြွေးရှင်၏အမွေကိုကြွေးရှင်၏တိုက်ခိုက်မှုမှလည်းကာကွယ်ပေးသည်။
US ရှိပြည်နယ်အနည်းငယ်ကသာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုကိုအပြည့်အဝခွင့်ပြုသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးအချို့မှာ Alaska, Delaware, Nevada နှင့် South Dakota တို့ဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်ကမ်းလှမ်းမှုပြည်နယ်များကန့်သတ်နှင့်အတူဤယုံကြည်မှုကိုဆက်ကပ်။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုကိုသူတို့မနေထိုင်သောပြည်နယ်တစ်ခုတွင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ သို့သော်ပြည်တွင်းယုံကြည်မှုအားလုံးသည်ပြည်တွင်းဥပဒေ၏အကန့်အသတ်အတွင်းတွင်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်, ကယ်လီဖိုးနီးယားတရားသူကြီးတစ် ဦး နီဗားဒါးယုံကြည်မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပြprovisions္ဌာန်းချက်ကိုလျစ်လျူရှုလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်တရားသူကြီးသည်အမေရိကန်၏ယုံကြည်မှုနှင့်အမေရိကန်ဂေါပကအပေါ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အမေရိကန်တရားသူကြီးတွေဟာနိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်မှာအာဏာမရှိဘူး။ ထို့ကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှု၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာကမ်းလွန်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်ဥပဒေကုမ္ပဏီသည်ဂေါပကအဖြစ်ဆောင်ရွက်သောကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုဆိုင်ရာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Go ကိုကမ်းလွန်?
ပြီးခဲ့သည့်အပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်နေထိုင်သည့်ပြည်နယ်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေအမေရိကန်၌ဤပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု၌အဘယ်ကြောင့်ခက်ခဲစေသနည်း။ အဖြစ် အမည်ခံအရင်းရှင် ရှင်းပြချက်တွင်ဤအတွက်အဓိကအကြောင်းအရင်းနှစ်ခုရှိသည် - privacy နှင့် protection ။
တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုတစ် ဦး ဂေါပကသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ ဂေါပကသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲသည်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြီးကြပ်သည်။ ဂေါပကသည်၎င်းကိုအများပိုင်မှတ်တမ်းများမှယေဘူယျအားဖြင့်ယုံကြည်သူနှင့်ထောက်ပံ့သူအားတားဆီးသည့်နည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကမ်းလွန်တည်ဆောက်ခြင်းသည်သင်၏ဒေသခံတရားရုံးမှအပိုအကာအကွယ်ပေးသည်။ ဒါဟာအစအခွန်ဖော်ရွေသည် ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုအခွန်ကောက်ခံမှု ပုံမှန်အားဖြင့်အခွန်ကြားနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အခွန်တိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချမထားဘူး။
ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏နိုင်ငံရှိတရားသူကြီးတစ် ဦး အားရန်ပုံငွေများသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြွေးရှင်ထံသို့လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်းမှတားဆီးပါသည်။ တနည်းကား, နိုင်ငံခြား Trustees ပြည်တွင်းတရားရုံးများမှဘာသာရပ်မရှိကြပေ။ အကယ်၍ ကြွေးရှင်သည်ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလိုက်စားလိုပါက၎င်းတို့သည်ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်ရှည်လျားပြီးတန်ဖိုးကြီးသောဥပဒေရေးရာစစ်ပွဲကိုဖြတ်သန်းရမည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်မြီစားရန်အတွက်ဖော်ရွေသောလေထုထဲတွင်တိုက်ပွဲကိုတိုက်ခိုက်ရန်လိုသည်။ ဒါကကြွေးရှင်တွေအတွက်အားကောင်းတဲ့အဟန့်အတားပဲ။
ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုဆိုင်ရာယုံကြည်မှုသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်သင့်မိသားစု၏အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်၎င်းကိုလုံခြုံစေသည်။ ဤဘဏ္toolာရေးကိရိယာသည်အခြားပါတီတစ်ခုဖြစ်သည့်သင်၏ယုံကြည်သူအားယုံကြည်မှုတွင်သိမ်းဆည်းထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြီးထွားရန်နည်းလမ်းများအားသင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ သတိပြုရမည့်အရာတစ်ခုမှာ၊ ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုကုန်ကျစရိတ် တစ် ဦး ကို set up ရန်ကုန်ကျစရိတ်ထက်နည်းနည်းပိုမိုမြင့်မားဖြစ်နိုင်သည် ပြည်တွင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယုံကြည်မှု။ သို့သော်သတိရပါ၊ စျေးနှုန်းမှာသင်ပေးရသောအရာဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးသည်သင်ရရှိသောအရာဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းယုံကြည်မှုနည်းနည်းလေးသက်သာသွားနိုင်တယ်။ အကယ်၍ တရားသူကြီးတစ် ဦး ကသင်၏ US trustee အားသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကိုလွှဲပြောင်းခိုင်းလျှင်၊ ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုသည်အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်ကကွာရှင်းပြတ်စဲမှုကြုံရသည့်အခါသင့်တွင်မှန်ကန်သောအကာအကွယ်မရရှိလျှင်သင်ပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးသည်အားနည်းချက်ရှိသည်။ ကွာရှင်းခြင်း၌ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်ယုံကြည်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကသင့်ကိုပိုင်ဆိုင်သူ၊ Forbes မဂ္ဂဇင်း ရှင်းပြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်သောယုံကြည်မှုသည်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုယုံကြည်မှုကိုယ်နှိုက်သို့ပေးသည်။ အချို့သောယုံကြည်မှုများကအနာဂတ်အိမ်ထောင်ဖက်ဟောင်းသည်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုငြင်းဆိုခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြသည့်အလွန်တိကျသောဝါကျများကိုပင်ပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အထူးအကျိုးရှိနိုင်သည်။ ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုများသည် C ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ လီမိတက်တာ ၀ န်ခံမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီများ (LLC) နှင့် Limited Partnerships များအပါအ ၀ င်အဖွဲ့အစည်းအများစုအတွက်ကာကွယ်မှုပေးသည်။ တရား ၀ င်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပါကဤပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများကိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာပြည်တွင်းတရားသူကြီးများသည်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအပေါ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ပြည်တွင်းယုံကြည်မှုအမျိုးအစားများကိုသာပိုင်ဆိုင်နိုင်သောကြောင့်ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုသည် S ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ အတူတူပင်ကမ်းလွန် LLC နှင့်ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုသည်အထူးသဖြင့်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ခိုင်မာသောကာကွယ်မှုကိုပေးနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင့်သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှု၏အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဟုသတ်မှတ်ထားသည်ဆိုလျှင်ကွာရှင်းခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွင်းတွင်သင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ သက်သက်သာသာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောယုံကြည်မှု၏အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတစ် ဦး သည်ယုံကြည်မှုမှငွေပေးချေမှုကိုသူသို့မဟုတ်သူမကိုယ်တိုင်မထုတ်ယူနိုင်ပါ။ ယုံကြည်မှုကို Trustee မှသာစီမံခန့်ခွဲသည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ထိန်းချုပ်သူသည်ယုံကြည်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်သည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများသည်၎င်းတို့ဆန္ဒရှိသည့်အခါတိုင်းသူတို့၏ ၀ င်ငွေအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ယုံကြည်မှုကိုအသာပုတ်။ မရသောကြောင့်၊
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော spendthrift အပိုဒ်အပြင်သင်၏ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုဖန်တီးသောအခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားအချက်အချို့လည်းရှိသည်။ ဤအပိုဆောင်းဝါကျများသည်ယုံကြည်မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ပြissuesနာများပေါ်ပေါက်လာသောအခါ၎င်းတို့မှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီသည်။ BizFilings ကရှင်းပြသည်။
အရေးကြီးသောအပိုဒ်တစ်ခုမှာဖိအားပေးမှုကိုဆန့်ကျင်သောအပိုဒ်ဖြစ်သည်။ အစပျိုးလိုက်သောအခါဤအပိုဒ်သည်ဂေါပကအဖွဲ့မှယုံကြည်သူထံမှအကျိုးခံစားခွင့်သို့ခွဲဝေချထားပေးခြင်းကိုတားဆီးပေးသည်။ "Duress" ဆိုသည်မှာကြွေးရှင်သည်နိုင်ငံခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပြင်ပရှိယုံကြည်သူသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားသူအားတရားစွဲဆိုခြင်းသို့မဟုတ်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သောအခါဖြစ်သည်။ တရားရုံးများကရန်ပုံငွေများကိုပြန်ပို့ရန်တောင်းဆိုနေကြသည်။ ဤအပိုဒ်ခွဲသည်ကြွေးရှင်ရှင်အားထိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရားစွဲဆိုခြင်းအားတားမြစ်ကန့်သတ်ထားသည်။ နှင့်ကမ်းလွန်တရားစီရင်ခြင်းကိုရရှိရန်ကုန်းမြင့်စစ်ပွဲကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတရားစီရင်မှုများသည်အကြွေးတင်သူများအတွက်အလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်နေရာများဖြစ်သည်။
အခွားသောဝါကျများတွင်ယုံကြည်မှုကာကွယ်သည့်အပိုဒ်၊ လေယာဉ်ပျံများနှင့်ဥပဒေအပိုဒ်ရွေးချယ်မှုတို့ပါဝင်သည်။ ယုံကြည်မှုကာကွယ်ရေးအပိုဒ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသူအားဖယ်ရှားရန်စွမ်းအားရှိသောကာကွယ်သူအမည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ကာကွယ်သူသည်ဂေါပက၏လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုဗီတိုအာဏာသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါလေယာဉ်အပိုဒ်ယုံကြည်သူသည်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့ယုံကြည်မှုကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ကြွေးရှင်သည်ကမ်းလွန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်တရားစွဲဆိုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကလေယာဉ်ပျံအငြင်းပွားမှုသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ပထမ ဦး စွာကြွေးရှင်သည်ကမ်းလွန်တရားစွဲဆိုမှုအတွက်အချိန်နှင့်ငွေအားလုံးကုန်ဆုံးသည်။ ထိုနောက်ဂေါပကသည်အခြားတရားစီရင်မှုများသို့ယုံကြည်မှုကိုရွှေ့ပြောင်း။ ထပ်မံ၍ မရနိုင်ပါ။ ရွေးချယ်မှုဥပဒေအပိုဒ်တွင်ရှင်းပြချက်ကိုယုံကြည်မှုသည်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေများအောက်တွင်အုပ်ချုပ်ရမည်။ ဤအပိုဒ်သည်တရားစီရင်ရေးကိုကာကွယ်ပေးသောအရာဖြစ်ပြီး၊
ကြီးမားသောပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုအကျိုးကျေးဇူးများရှိသောနိုင်ငံများစွာရှိသည်။ သို့သော်မည်သည့်တစ်ခုကသင့်အတွက်မှန်ကန်သနည်း။ ထိုမေးခွန်း၏အဖြေသည်သင်အတွက်အရေးအပါဆုံးနှင့်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ The အနုပညာရှင် Escape ကူကျွန်းစုများနှင့်ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုများအနက်အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုတရားစီရင်မှုများကိုဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ကွတ်ခ်ကျွန်းနှင့်နီဗီစ်များသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤတရားစီရင်မှုနှစ်ခုသည်အမေရိကန်ဖောက်သည်များနှင့်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့၏ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများကအမေရိကန်ဥပဒေများကို၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ Nevis, Belize, Cayman Islands နှင့် Cook Islands သည်အခွန်ကိစ္စရပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်တွေဟာ US Internal Revenue Code နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဤသည်အလှည့်၌အခွန်လိုက်နာမှုနှင့်အစီရင်ခံပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ တိုင်းပြည်တိုင်းတွင် ၄ ခုနှင့်အတူဒေသန္တရအခွန်ကျွမ်းကျင်သူများတူညီကြသည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်သင်၏ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ရန် ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးနောက်ထပ်အပိုဆောင်းအလုပ်တစ်ခုရထိုက်သောအကျိုးကျေးဇူးများရှိနိုင်သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးမည်သည့်လိုအပ်ချက်နှင့်မဆိုပင်လယ်ကမ်းလွန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
သင်၏ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးယုံကြည်မှုအတွက်မည်သည့်နိုင်ငံကိုသင်ရွေးချယ်ပါစေ၎င်းကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီရန်သင်ယုံကြည်ရသောကျွမ်းကျင်သူများသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေများမှာရှုပ်ထွေးပြီးအမှားများကအလွန်ကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်ဤစာမျက်နှာရှိဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပါ။ သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။ သင်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနေကြောင်းသေချာပါစေ ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများသင်၏ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကူညီပါ။ လမ်းပေါ်သို့လာကောင်းရောက်နိုင်သည့်ကမ်းလွန်ကိစ္စရပ်များကိုညှိနှိုင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းအမေရိကန်ရှေ့နေနှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။